सस्तो र सहुलियत दरमा मोटरसाइकल किन्ने सोंचमा हुनहुन्छ ? जान्नुहोस मूल्य र सुविधा -
सस्तो र सहुलियत दरमा मोटरसाइकल किन्ने सोंचमा हुनहुन्छ ? जान्नुहोस मूल्य र सुविधा
काठमाडौं। नेपालमा बार्षिक ३ लाख ५० हजार यूनिटभन्दा धेरै मोटरसाइकल बिक्री हुने गरेको छ । यस्तोमा मोटरसाइकल बिक्रेता कम्पनीले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न विभिन्न स्कीम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विशेषत सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल बिक्री गर्नेमा बजाज, होन्डा, यामाहा, टीभीएस जस्ता कम्पनीले आफ्नै हायर पर्चेज कम्पनी मार्फत ग्राहकलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन्।
बजाजले आफ्नो हुलास इन्भेष्टमेन्ट, होन्डाले स्याकार इन्भेष्टमेन्ट, यामाहाले एमएडब्ल्यू इन्भेष्टमेन्ट र टीभीएसले जगदम्बा इन्भेष्टमेन्ट मार्फत मोटरसाइकल किन्नेलाई कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मोटरसाइकल आवश्यक भएका मानिसले आफ्नो कमाई र रुची अनुसारको मोटरसाइकल छनोट गर्न सक्ने छन् । लामो समयदेखि नेपाली बजारमा मोटरसाइकल बिक्री गर्दै ४ कम्पनीका उत्पादन किन्दा कति मासिक किस्ता भुक्तानी गर्नु पर्छ भन्ने जानकारी दिन हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका छौं।
यहाँ उल्लेख भएका सबै कम्पनीले २४ महिनामा कर्जा भुक्तान हुनेगरि आफ्नो मोटरसाइकलको मासिक किस्ता बनाएका छन् । हामीले यो रिपोर्ट तयार पार्दा कम्पनीले उल्लेख गरेको आधिकारीक मूल्यलाई आधार बनाएका छौं । यसमा लाग्ने अन्य खर्च बीमा रकमसमेत मूल्यमा जोडिएको छैन भने कम्पनीले बेलाबखत गर्ने स्कीम वा अफरपनि घटाइएको छैन।
पल्सर १५० डबल डिस्क – हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले बिक्री गर्दै आएको बजाज पल्सर १५० टीडीको मूल्य २ लाख ६६ हजार ९ सय रुपैयाँमा रहेको छ । कम्पनीले यसलाई ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टपछि ग्राहकलाई मासिक किस्ता बुझाउनु पर्नेगरि कर्जा प्रबाह गर्दै आएको छ । यो मोटरसाइकल किन्न चाहने ग्राहकले १ लाख ६ हजार ७६० रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ भने कर्जा वापत १ लाख ६० हजार १४० रुपैयाँ हुनेछ । कम्पनीले १५ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा कर्जा दिने भएकाले मासिक ७ हजार ७६४ रुपैयाँ किस्ता वापत तिर्नु पर्ने हुन्छ । पल्सर १५० मा १४९.५ सीसी सिंगल सिलिन्डर ट्वाइन स्पार्क मोटर लगाइएको छ । उक्त इन्जिनले १४ पीएस पावरका साथै १३.४ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ।
यामाहा एफजेड भी ३ – यामाहाको चर्चित मोडल एफजेड भी३ किन्न चाहने ग्राहकले यसको बजार मूल्यको ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । मोरङ अटो वर्कसले यसको बजार मूल्य ३ लाख १८ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यदि तपाई यामाहा एफजेड भी ३ किस्ताबन्दीमा किन्न चाहनु हुन्छ भने तपाईले १ लाख २७ हजार ५६० रुपैयाँ डाउन पेमेन्टको रुपमा बुझाउनु पर्छ भने १ लाख ९१ हजार ३४० रुपैयाँ २४ महिने किस्तामा तिर्नेगरि कर्जा सुविधा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसरी किस्तामा लिदा कम्पनीले १५ प्रतिशत व्याज लिनेछ भने मासिक रुपमा ९ हजार २७७ रुपैयाँ किस्ता वापत बुझाउनु पर्नेछ । यसमा उपलब्ध फ्युल इन्जेक्शन एयर कुल्ड इन्जिनले ८ हजार आरपीएममा १२.९ बीएच पावरका साथै ६ हजार आरपीएममा १२.८ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ।
होन्डा यूनिकर्न – होन्डाको आधिकारीक वितरक स्याकार ट्रेडिङले लामोसमय बिक्री गरेको यूनिकर्न १५० पछिल्लो समय नेपालमा बिक्री बन्द गरिएको थियो । तर, कम्पनीले आफ्नो वेष्ट सेलिङ मोडललाई पुनः नेपालमा बिक्री सुरु गरेको छ । कम्पनीले यो मोडलको मूल्य २ लाख ५९ हजार ९०० रुपैयाँ तोकेर बिक्री सुरु गरेको हो । यदि तपाई नयाँ यूनिकर्न किन्न चाहनु हुन्छ भने कम्पनीले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र बाँकी रकम कर्जामा दिनेगरि मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने जनाएको छ । होन्डाले अन्य कम्पनीको तुलनामा व्याजदरमा फरक गरेको छ । यदि तपाईले तिर्नु पर्ने सबै किस्ता समयमा तिरेको खण्डमा ९.९९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाउनु हुनेछ । यदि समयमा किस्ता तिर्न नसकेको खण्डमा व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने जनाएको छ।
यसमा आधारित रहेर यूनिकर्न किन्ने ग्राहकले १ लाख ३ हजार ९६० रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ भने कर्जा वापतको १ लाख ५५ हजार ९४० रुपैयाँलाई मासिक ७ हजार १९५ रुपैयाँको दरले २४ किस्तामा तिरिसक्नु पर्नेछ । कम्पनीले यसमा १४९ सीसी सिंगल सिलिण्डर काब्रुरेटर इन्जिन दिएको छ । उक्त इन्जिनले १२.७३ बीएच पावर प्रदान गर्नेछ।
आरटीआर १६० फोर भी – जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा बिक्री गर्दै आएको टीभीएस आरटीआर १६० फोर भीको मूल्य २ लाख ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा रहेको छ । यसलाई ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट तिरेर ग्राहकले अन्य रकम किस्तामा तिर्नेगरि खरिद गर्न सक्ने छन् । कम्पनीले किस्तामा आरटीआर १६० फोर भी किन्दा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नेलाई १७ प्रतिशत व्याज लाग्ने जनाएको छ भने ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नेलाई ० प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।
४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नेले सुरुमा १ लाख १५ हजार ९६० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भने ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नेले १ लाख ४४ हजार ९५० रुपैयाँ जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नेले १ लाख ७३ हजार ९४० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ भने मासिक किस्ता वापत ८ हजार ६०० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यदि ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्ने हो भने १ लाख ४४ हजार ९५० रुपैयाँ कर्जा रकम रहने छ । त्यसलाई १८ महिनामा तिर्दा मासिक ८ हजार ५९ रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ । यस मोटरसाइकलमा १५९.७ सीसी सिंगल सिलिण्डर, ४ स्ट्रोक, ४ भल्भ इन्जिन रहेको छ । उक्त इन्जिनले १६.५ पीएस पावर प्रदान गर्छ।